Hevitra haingana: fitsapana mialoha mialoha ho an'ny mailaka mivantana | Martech Zone
Hevitra haingana: fitsapana mialoha ho an'ny mailaka mivantana
Zoma, Aprily 20, 2018 Zoma, Aprily 20, 2018 Douglas Karr
Talohan'ny nandehanako niomerika dia niasa tamin'ny gazety sy indostrian'ny mailaka mivantana aho. Na dia tsy nety nandray na nifanaraka ara-potoana aza ny gazety mba hitazomana ny fifehezany ny teti-bolan'ny dokam-barotra, dia mbola mitondra valiny tsy mampino hatrany ny mailaka mivantana. Raha ny marina, miady hevitra aho fa maro ny fampielezana marketing mivantana amin'ny mailaka mivantana no mety hisarika ny sain'ny maro kokoa - mamaky ny tabataban'ny nomerika. Ny tena izy dia, na dia mahazo mailaka sy sora-baventy an-jatony mamely ahy isan'andro aza aho, dia vitsy ny mailako mivantana azoko… ary jereko daholo izy rehetra.
Toy ny ankamaroan'ny mpampita vaovao, ny mailaka mivantana kosa dia mitaky fandrefesana sy fanatsarana hatrany. Raha jerena ny vidin'ny mailaka dia maro ireo mpivarotra no nilavo lefona noho izany antony izany ary nifindra tamin'ny fomba nomerika tsy dia atahorana loatra. Mampalahelo… satria ny fahazoana lohalaharana amin'ny vina aman-jery sasany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fampitaovana nentim-paharazana.
Ahoana raha azonao atao ny mizaha toetra ny fampielezana mailaka mivantana anao raha tsy misy izany sarany izany?
Quad / Graphics dia nanangana sehatra fitiliana mailaka mivantana izay mampiasa analytics mialoha haminavina haingana kokoa ny famoronana sy ny endrika tsy misy mailaka ara-batana. Antsoina hoe Hevitra haingana ary afaka mitsapa hatramin'ny 20 ny atiny miovaova ao anatin'ny iray pass. Mampiasa matrix persona be pitsiny iray izay manambatra demografika sy toetra mampientam-po haminany izay antony manosika olona iray hanao tolotra.
Amin'ny salan'isa, ny Accelerated Insights dia nanampy ny mpivarotra hanatitra:
18 ka hatramin'ny 27 isan-jato atsangano ny tahan'ny valiny
azo ianteherana miteraka 60 andro vs. iray ka hatramin'ny roa taona hanaovana fitsapana nentim-paharazana
A Fihenan'ny 90 isan-jato amin'ny vidin'ny fitsapana
Tratra izany rehetra izany raha tsy mandefa mailaka ara-batana tokana. Ilay sehatra, antsoina hoe Accelerated Insights, dia manamarina fa ny vinavina amin'ny fanandramana dia 97 isan-jato marina (+/- 3 isan-jato), miantoka ny valin'ny fanadihadiana dia haverina amin'ny fitsapana mivantana. Ny ekipa dia nametraka sy nanandrana ny rafitra tamin'ny indostria maro:
Fiantohana fiara-pirenena - Ny vinaingitra haingana dia nanambara ny fiakaran'ny 23 isan-jato amin'ny tahan'ny valiny, ny tena fiakarana dia 25 isan-jato.
Telecom nasionaly - Nihena 55% ny teti-bolam-panandramana aorian'ny faminaniana ny Accelerated Insights fa ny singa iza no nisy fiatraikany lehibe indrindra
Mpivarotra kiraro manokana any amin'ny faritra - Fiakarana 32 isan-jato ho setriny izay nihoatra ny 200 isan-jato farafahakeliny ny tsipika KPI an'ny orinasa. Ny orinasa dia nanitatra ny fampiasana ny Accelerated Insights persona matrix ho any amin'ny làlam-barotra rehetra
Firma fiantohana ainam-pirenena - Ny vinainganana haingana dia nanambara ny fiakarana 18 isan-jato ho valiny ary ny tena fiakarana dia 19 isan-jato
Tags: fahitana hainganamail mivantanafaminaniana mivantanafanandramana mailaka mivantanamarketing mivantanavinavina Analyticsmail mivantana mivantanaQUAD / Graphicsfitsapana mailaka mivantana